कर्पोरेट Archives - Safal Awaj Safal Awaj
असार १४, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानीका लागि अष्ट्रेलिया समक्ष आग्रह गरेको छ । नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत फेलीसिटी वोल्कसँग चेम्बर भवनमा आज भएको भेटवार्तामा चेम्बरका पदाधिकारीले जलविद्युत, बन, पर्यटन, कृषि एवं साना उद्योगमा लगानीका लागि आग्रह गरेका हुन् । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच ६० बर्ष भन्दा पुरानो कुटनीतिक सम्वन्धलाई थप बलियो बनाउन सरकारी र नीजि क्षेत्रबाट उच्चस्तरीय आर्थिक साझेदारीको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच ६० बर्ष भन्दा पुरानो कुटनीतिक सम्वन्धलाई थप बलियो बनाउन… पुरा पढौ
नयाँ टिएमएस राख्न नेप्सेले जारी गर्‍यो कार्यविधि
काठमाडौं, १४ असार । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नयाँ टिएमएस राख्न चाहने ब्रोकर कम्पनीको लागि कार्यविधि जारी गरेको छ। नेप्सेले धितोपत्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि,२०७९ जारी गरेको हो। कार्यविधि अनुसार ब्रोकर कम्पनीले नयाँ टिएमएस राख्न सबैभन्दा पहिले निवेदन दिनु पर्नेछ। दिएको निवेदन अनुसार नेप्सेलाई उपयुक्त लागे नयाँ टिएमएस राख्ने अनुमति दिनेछ। नयाँ टिएमएस राख्ने ब्रोकर कम्पनीले उक्त टिएमएस सँगै दुई प्राविधिक कर्मचारी समेत राख्नु पर्नेछ। नेप्सेको प्रणालीसँग जोडे बापत ब्रोकर कम्पनीले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ समेत बुझाउनु पर्ने… पुरा पढौ
किन राेकियाे २ बीमा कम्पनीको शेयर कारोबार ?
काठमाडौं, १४ असार । मर्जरका लागि प्रक्रियामा रहेका २ बीमा कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्का भएको हो । सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने भएपछि दुवै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भएको हो ।आइतवार दुई कम्पनीबीच मर्ज सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरसँगै सेयर कारोबार रोक्का भएको हो । दुवै कम्पनीले कारोबार रोक्का भएको जानकारी नेप्सेलाई गराएका छन् । एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्झौतामा सूर्या लाइफका… पुरा पढौ
धमाधम मर्जरमा बीमा कम्पनी, सूर्या र ज्योति लाईफले गरे सम्झौता
काठमाडौं, १३ असार । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफबीच मर्जरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवन कुमार खड्काले मर्जरमा जाने सम्झौतापत्रमा आइतबार हस्ताक्षर भएको बताए । होटल याक एण्ड यतीमा भएकाे कार्यक्रममा दुबैतर्फबाट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । स्वाप रेसियो कम्पनीको डिडिए पछि तय हुने उनले बताए । ‘मर्जरमा जाने सम्झौतापत्रमा मात्रै हस्ताक्षर भएको हो,’ खड्काले भने । उनका अनुसार स्वाप रेसियो कम्पनीको डिडिए पछि तय हुनेछ। बीमा समितिको निर्देशन अनुसार… पुरा पढौ
प्रभु क्यापिटलले सञ्चालनमा ल्यायो आयोजना प्रभावितका लागि अनलाइनबाटै आइपिओमा आवेदन दिने सेवा
काठमाडौं, १२ जेठ । प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले नेपाली पूँजी बजारमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको विकास गरी ग्राहक तथा सम्पूर्ण नेपाली पूँजीबजारको विकासमा आफ्नो तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यसैक्रममा प्रभु क्यापिटलले नेपालमा सर्वप्रथम आयोजना प्रभावित स्थानीयहरुले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रभु क्यापिटलले पिपुल्स पावर लिमिटेडको प्राथमिक निष्काशन गर्ने क्रममा इलाम जिल्लाका आयोजना प्रभावित वासिन्दाहरुले आफैले अनलाइनबाट आवेदन दिन मिल्ने गरी यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसका लागि प्रभु क्यापिटलको वेबसाइट https://ipoapply.prabhucapital.com/ बाट आवेदकहरुले… पुरा पढौ
नागरिक लगानी कोषले ३१.५७ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, १२ असार । नागरिक लगानी कोषले लगानीकर्तालाई ३१.५७ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कोषले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मुनाफाबाट उक्त लाभांश दिन लागेको हो । कोषको शनिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि १.५७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरी कोषको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले पाउनेछन् । पुरा पढौ
हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो मर्जरको अन्तिम स्वीकृति, एक महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने
काठमाडौं, १२ असार । बीमा समितिले हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यी कम्पनीलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब यी दुवै कम्पनीले एक महिनाभित्रै अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले वैशाख २२ गते मर्जरमा जाने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स स्वाप रेसियो १०० बराबर ८५ मा गाभिन लागेका हुन् । मर्जर पश्चात… पुरा पढौ
“माटो जोगाऔँ ” अभियान अन्तरगत सद्‌गुरुको १०० दिने यात्रामा विश्वभरका ३.२ अर्ब मानिसकाे सहभागिता
काठमाडाैं, १० असार । ईशा फाउण्डेशनका संस्थापक सद्‌गुरुको १०० दिने एकल मोटरसाइकल यात्रा २७ राष्ट्रहरू र भारतका ९ राज्यहरू हुँदै ३०,००० कि.मी. पूरा गरी तमिलनाडुस्थित ईशा योग केन्द्रमा रहेको भव्य आदियोगीको प्राङ्गणमा २१ जुनको रातमा समापन भयाे । हजारौँको सङ्ख्यामा उपस्थित स्वयंसेवकहरूद्वारा साँस्कृतिक प्रस्तुतिहरू र विशेष आरतिको माध्यमले सद्‌गुरुलाई पारम्परिक तरिकाले स्वागत गरिएको थियो । विश्वव्यापी स्तरमा शुरु गरिएको माटो जोगा‌औँ अभियानको क्रममा पछिल्लो तीन महिनामा ३.२ अर्ब मानिसहरूले माटोको बारेमा आवाज उठाएका छन् । यात्राको क्रममा ६ सयभन्दा बढी… पुरा पढौ
बीमा समितिले गर्‍यो २२ बीमा कम्पनीलाई कारबाही, कुन–कुन परे कारबाहीमा ?
काठमाडौं, १० असार । बीमा समितिले २२ बीमा कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको छ । समितिले समयमा लेखापरिक्षण नबुझाउने ति बीमा कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको हो । निर्धारित समयमा वित्तीय विवरण तयार पारी लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएकाे बीमा समितिले जनाएकाे छ। समितिले यसअघि पनि नियम विपरित काम गर्ने वा दायरा बाहिर बस्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको थियो । नियामकीय सीमाभन्दा बाहिर गएका कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा नबसे आगामी दिनमा थप कारबाही गर्ने सन्देश समितिले बिहीवार एकै पटक २२ वटा बीमा कम्पनीहरूलाई कारबाही… पुरा पढौ
चीनमा नेपाली हस्तकला सामग्री प्रवर्धन गर्न महासंघकाे आग्रह
काठमाडाैं, १० असार । नेपालका हस्तकला व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल हस्तकला महासङ्घले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनमा नेपाल हस्तकला सामग्री प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरेको छ । महासङ्घले जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई भेटेर नेपाली परम्परागत हस्तकलालाई चीनमा प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरेको हो । भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले चीनमा रहेको नेपाली राजदूतावासमा नेपाली परम्परागत हस्तकला झल्किने वस्तुको प्रदर्शनी कक्ष राख्नुपर्ने बताए । उनले नियमितरूपमा भन्सार नाका नखुल्दा नेपाली हस्तकला निर्यातमा समस्या भएको भन्दै भन्सार नाका सहजीकरणका लागि चीन… पुरा पढौ
काठमाडौँ, १४ असार । नेकपा (एमाले)का पूर्व नेता वामदेव गौतमले ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय…